युगल: तपाईको आईप्याड एक अतिरिक्त मोनिटरको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् Martech Zone
युगल: तपाईको आईप्याड एक अतिरिक्त मोनिटरको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्
सोमवार, जुन 17, 2019 सोमवार, जुन 17, 2019 Douglas Karr
प्रत्येक चोटि एक पटक, तपाईं केहि आश्चर्यजनक अनुप्रयोग पत्ता लगाउनु भयो जुन तपाईं आश्चर्य बिना तपाईंले कहिले पनि कसरी गर्नुभयो। म ग्राहकहरु र देशभरका सहकर्मी सुविधाहरुमा एक टन अनसाइट काम गर्दैछु, तर मलाई केवल एक स्क्रिनको साथ उत्पादक हुन गाह्रो लाग्यो। म मेरो अफिसमा बहु स्क्रिनहरू राखेर बिग्रिएको थियो, र म सडकको लागि केहि चाहान्छु।
एक यूटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि कामदारहरूले 44 XNUMX% लाई बढावा दिएका थिए उत्पादकत्व पाठ कार्यहरूको लागि र स्प्रेडशिट कार्यहरूको लागि २%% वृद्धि जब एकलबाट सर्दै पर्दाaदोहरी-मनिटर सेटअप।
मैले आईप्याडका लागि एउटा अनुप्रयोग पत्ता लगाएँ, युगल, जुन ईन्जिनियर गरिएको र केहि एप्पल ईन्जिनियरहरूले निर्माण गरेका थिए, र यो शानदार भयो। विलम्बता अविश्वसनीय छ, म अझै टच स्क्रीन प्रयोग गर्न सक्दछु, र मँ आईप्याड स्क्रिनमा टच बार क्षमता सक्षम गर्न सक्दछु।
यहाँ मेरो एक ग्राहकमा मेरो रिमोट डेस्कको शट छ। मँ प्लग इन हुँ डिस्प्लेलिंक प्लग गर्न योग्य डेस्क मोनिटर र नेटवर्कको लागि, त्यसपछि मेरो आईप्याड प्रो प्लग इन गर्नुहोस् USB मार्फत डिस्प्लेलिंकमा। डिस्प्लेलिink हार्डवेयरको आवश्यक टुक्रा होईन ... तिनीहरूसँग यो विशिष्ट ग्राहकमा के हुन्छ।
म OSX को डिस्प्ले सेटिंग्स को प्रयोग बाट डिस्प्लेहरु लाई पign्क्तिबद्ध गर्न सक्छु र मँ तानेर ड्रप गर्न सक्छु कुनै स्क्रिनमा
जब म छोड्छु, मँ जहाँ जहाँ भए पनि मेरो ल्यापटप र आईप्याड कतै र प्लगइन ल्याउँछु। डुएट अनुप्रयोग दुबै उपकरणहरूमा चल्नु आवश्यक छ, तर सेटअप एउटा हावा थियो र म USB मार्फत प्लग इन गर्ने बित्तिकै मोनिटर जीवित थियो। यदि म चाहें भने म अन्य आईप्याड अनुप्रयोगहरू अझै पनि प्रयोग गर्न सक्दछु।
डुएटले आफ्नो सफ्टवेयर पनि पीसीको लागि उपलब्ध गराएको छ!
टैग: युगल प्रदर्शनआईप्याड प्रदर्शनदोस्रो मोनिटरतेस्रो मोनिटर
उपभोक्ता प्याकेज प्याकेज गरिएका सामानहरू कसरी ठूलो डाटा प्रयोग गरिरहेका छन्?
ओम्नी-च्यानल संचारका लागि व्यावहारिक रणनीतिहरू